ပညာရေးအတွေးအခေါ်ပညာရှင်များ :: partner
Homepage > ပညာရေးအတွေးအခေါ်ပညာရှင်များ
လူသားသည် မွေးဖွားလာ ကတည်းကပင် နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးနှင့် သက်ဆိုင်သော ရသင့်ရထိုက်သည့် အခွင့်အရေးများ ရှိသည်ဟုလည်း ရူးဆိုးက မမှိတ်မသုန် ယုံကြည်လေသည်။ ပြင်သစ် အာဏာရှင် နပိုလီယံကပင်လျှင် ရူးဆိုး၏ အတွေးအခေါ်သစ်များသာ ပေါ်ပေါက်မလာပါက ပြင်သစ်တော်လှန်ရေး ဖြစ်ပေါ်လာစရာ အကြောင်းမရှိဟု ဆိုလေသည်။ နှောင်းခေတ် ပညာရှင်တို့ကလည်း ရူးဆိုး၏ ယင်း (Social Contract ) ကို ပြင်သစ် တော်လှန်ရေး သမ္မာကျမ်းစာ ဟူ၍လည်းကောင်း၊ အမေရိကန် လွတ်လပ်ရေး ကြေညာ စာတမ်း၏ အခြေခံဟူ၍ လည်းကောင်း သတ်မှတ်ထားကြပါမည်။ (Social Contract ) နည်းတူ အခြားထင်ရှားသော ကျမ်းတစ်စောင်မှာ (Emile) ခေါ် ပညာရေးဆိုင်ရာ အတ္ထုပ္ပတ္တိပင် ဖြစ်လေသည်။ ပညာရေးနှင့် ပတ်သက်သော အတွေးအခေါ် အယူအဆနှင့် သဘာဝဆန်သော အကျင့်အကြံ အားလုံးကို ယင်း (Emile) ကျမ်း၌ ရေးသား ဖော်ပြထားသည်ကို တွေ့ရှိရလေသည်။
ဤကာလအတွင်း အလယ်ခေတ် သာသနာရေးဆိုင်ရာ လွှမ်းမိုးချက်များကြောင့် လူသည် ဆိုးသွမ်းသော သဘာဝနှင့် မွေးဖွားလာသည်ဟု ယူဆကြသည်။ ထို့ကြောင့် ကလေးသူငယ်များကို ပညာပေးရာ၌ ဆိုးသွမ်းသော သဘာဝ၊ ဗီဇများကို ပြုပြင် ပြောင်းလဲ၍ ကောင်းသော အရည်အချင်းများကို ညွန်ကြား သင်ကြားပေးရမည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။ တစ်ဆက်တည်းမှာပင် ကလေးငယ်များအား ကောင်းမြတ်သော နိုင်ငံသားများ ဖြစ်စေရန်နှင့် လူတို့၏ ကျင့်ဝတ်စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းနှင့် ဆက်ဆံရေး နယ်ပယ်တွင် အဆင်ပြေစေရန် လေ့ကျင့် ပညာ ပေးကြသည်။ ယင်းအခြေအနေတွင်း ကလေးကို လူကြီး အငယ်စားဟု သဘောထားကာ လူကြီးတစ်ယောက် ကဲ့သို့ ပြုမူကျင့်ကြံ စေလိုသဖြင့် ကလေးသူငယ်များမှာ စိတ်၏ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှု ဖြစ်ကြလေသည်။
Willam Boyd; (tr, and ed;) The Emile of jean jacques Rousseau, Teacher College Press, New York ; 1962.
William Boyd ; The History of Western Education, J.W. Arrowsmith Ltd, Bristol ; G.B, 1957.
S.J Curtic and M.E. A Bouttwood; A Short History of Education ldead, University Tutorial Press Ltd, London ;1957.
Alan Cohen and Norman Garner; Reading in the History of Educational Thoughts, University of London Press Ltd, 1967.
Poul Monroe; The History of Education
အဖိနှိပ်ခံတို့အား ပညာသင်ကြားရေးနှင့် ပေါလိုဖရေး မိတ်ဆက်
“ကြားနေသော ပညာရေးဟူ၍ကားမရှိ။ မျိုးဆက်များကို လက်ရှိစနစ်အတွင်း လိုက်လျောညီထွေရှိစေရန် သိမ်းသွင်းမှု အတွက်ဖြစ်စေ ပညာရေးကို အသုံးချသည်။ သို့တည်းမဟုတ်မူ သူတို့၏ ကမ္ဘာကို ပြုပြင် ပြောင်းလဲရာတွင် ကိုယ်တိုင်ပါဝင် ဆောင်ရွက်ခွင့်ကို ရှာဖွေပြီး လက်တွေ့အခြေအနေနှင့် ပြဿနာများကို ပိုင်းခြားဖြေရှင်းခြင်း နည်းလမ်းများဖြင့် လွတ်မြောက်မှုအတွက် ပညာရေးဖြစ်သည်။”
ဘရာဇီးလူမျိုး ပညာရေးပညာရှင် (၂၀ ရာစု)
“အဖိနှိပ်ခံတို့၏ ပညာသင်ကြားရေးနည်းလမ်းမှာ လူ့ဂုဏ်သိက္ခာကို ပြန်လည်ပိုင်ဆိုင်နိုင်ရန် စဉ်ဆက်မပြတ် တော်လှန်မှုတွင် တစ်ဦးချင်းအနေဖြင့်ဖြစ်စေ၊ လူထုတရပ်လုံးဖြစ်စေ အဖိနှိပ်ခံတို့နှင့် တစ်သားတည်း ကျနေစေရမည် ဖြစ်သည်။ ဖိနှိပ်မှုရေရှည်စေရေးအတွက် သင်ကြားရေးနည်းလမ်း မဖြစ်စေရ။ ဤသင်ကြားရေး နည်းလမ်းသည် ဖိနှိပ်အုပ်ချုပ်မှုနှင့် နောက်ခံအကြောင်းတရားတို့ကို အဖိနှိပ်ခံပြည်သူများမှ ပြန်လှန်ဆန်းစစ်ခြင်း ဖြစ်ပေါ်စေပြီး ဤသို့ဆန်းစစ်စဉ်းစားခြင်းမှ လွတ်မြောက်မှုကို စတင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။”
ပေါလိုဖရေး Paulo Freire (1921-1997) မှာ နှစ်ဆယ်ရာစုအတွင်း ပညာရေးလောကတွင် ပိုင်းခြား ဝေဘန် ဆန်းစစ်မှုရှိသော ပညာရေးသီအိုရီနှင့် နည်းလမ်း Critical Education တို့နှင့် ပတ်သက်၍ အရေးပါပြီး လွှမ်းမိုးမှုအရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်သည်။ ယနေ့ထက်ထိလည်း သူ၏သြဇာလွှမ်းမိုးနေဆဲပင်။ ဘရားဇီးနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်း Recife ဒေသတွင် ၁၉၂၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၉ ရက်နေ့တွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ သက်ကြီးပညာရေးလှုပ်ရှားမှုကြောင့် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀ိုင်းတွင် ထင်ရှားလာခဲ့သူ ဖြစ်သည်။ ပိုင်းခြားဝေဘန်မှုရှိသော ပညာရေးသီအိုရီ၏ လမ်းစကိုလည်း ဤသက်ကြီးပညာရေး လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ရင်းရရှိလာခဲ့၏။ တဖြည်းဖြည်းနှင့် ဤသီအိုရီမှာ သက်ကြီးပညာရေးနယ်ပယ်ကို ကျော်လွန်လာခဲ့သည်။ ရှားပါးသော ပေါင်းစပ်ထားခြင်းများဖြင့် ဖိနှိပ်ခံတို့၏ တော်လှန်မှုတွင် ပညာရေး၏ အခန်းကဏ္ဍကို အလေးထားခဲ့သည်။ သူ၏နိုင်ငံရေးခံယူချက်များနှင့် ဆန်းသစ်သော အတွေးအမြင်တို့ကို မိမိကိုယ်ကိုနှိမ့်ချမှုရှိခြင်း၊ ဥပဓိရုပ်ခန့်ငြားခြင်းနှင့် ပညာရှင်တစ်ဦး၏ အသိပညာနက်ရှိုင်းမှုတို့ဖြင့် ပေါင်းစပ်ထားရှိလေသည်။
၁၉၂၉ ခုနှစ် စီးပွားပျက်ကပ်ကာလအတွင်း ဆင်းရဲမွဲတေခြင်းနှင့် ငတ်မွတ် ခေါင်းပါးမှု ဒဏ်တို့ကို ခံစားခဲ့ရသူဖြစ်သည်။ ခဏတာမျှ ကြုံတွေ့ခဲ့ရသော်လည်း ဤအတွေ့အကြုံတို့မှာ ဆင်းရဲ သားများအတွက် သူ၏ စိုးရိမ်ပူပန်စိတ်ကို ပုံဖေါ်ခဲ့ပြီး ပညာရေးအတွေးအမြင်ကို တည်ဆောက်ရာတွင်လည်း အကူအညီရခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် သူ၏မိသားစုစီးပွားရေးပြေလည်လာခဲ့သည်။
လူမှုတော်လှန်ရေးနှင့် သက်ကြီးပညာရေးတို့တွင် ပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့၏။ အထူးသဖြင့် ကက်သလစ်ဘုရားကျောင်းမှ လူထုအခြေပြုလုပ်ရှားမှုနှင့် ခေတ်ပေါ်ယဉ်ကျေးမှုတို့နှင့် ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ ဘရားဇီးနိုင်ငံ အရှေ့မြောက်ပိုင်းဒေသတွင်းရှိ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသော တောင်သူလယ်သမားများနှင့် အလုပ်သမားများတို့အတွက် အလုပ်လုပ်ရင်း သူ၏ကျော်ကြားလာမည့် စာမတတ်ခြင်းဆိုင်ရာပြဿနာများကို ဖြေရှင်းမှုတို့ကို အဦးအစဖေါ်ထုတ်ခဲ့သည်။ ဤအတွေ့အကြုံများနှင့် ထင်ရှားသော သက်ကြီးစာတတ်မြောက်ရေးအစီအစဉ်များကို ချမှတ်လုပ်ဆောင်ခြင်းများကြောင့် ဘရာဇီးနိုင်ငံ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အမျိုးသားအဆင့် စာမတတ်သူပပျောက်ရေးအစီအစဉ်တွင် အလုပ်လုပ်ရန် ဖိတ်ကြားခဲ့သည်။ အောင်မြင်မှုများရရှိခဲ့သော်ငြားလည်း ၁၉၆၄ ခုနှစ်တွင် စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆိုးကြောင့် သူ၏ပညာရေးလုပ်ငန်းများ အဟန့်အတားဖြစ်ခဲ့ရသည်။ ပေါလိုဖရေးအားဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး ချီလီနိုင်ငံသို့ နယ်နှင်ဒဏ်ပေးခဲ့သည်။ ပြည်ပ အဝေးရောက်ကာလများအတွင်း ပေါလိုဖရေးအနေဖြင့် နေရာအတော်များများတွင် အလုပ်လုပ်ခွင့်ရရှိခဲ့သည်။ ချီလီ၊ အင်ဂိုလာ၊ မိုဇမ်ဘစ်၊ ကိတ်ဗါဒီ၊ ဂီနီဘစ်ဆော၊ နီကာရာဂွာနိုင်ငံများနှင့် အခြားသော နယ်မြေများတွင် စာတတ်မြောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ယူနက်စကိုတွင် ပညာရှင်တစ်ဦးအနေဖြင့်လည်းကောင်း၊ ဂျီနီဗာအခြေစိုက် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ခရစ်ယာန်ကောင်စီ၏ ပညာရေးဌာနတို့တွင်လည်းကောင်း အမှုထမ်းခဲ့သေးသည်။ တကမ္ဘာလုံးတွင်သူ၏နာမည်ကျော်ကြားလာသည်နှင့်အမျှ ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် ဖိတ်ကြားခြင်းခံခဲ့ရသည်။ နိုင်ငံတကာရှိ တက္ကသိုလ်များမှ ဆုတံဆိပ်များနှင့် ဂုဏ်ထူးဆောင်ပညာရှင်ရာထူးများကို ရရှိခဲ့သည်။
၁၉၇၉ ခုနှစ်တွင် ဘရာဇီးနိုင်ငံမှ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ကြေညာခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း အဝေးရောက်သူများ ပြန်လာခွင့်ရရှိခဲ့သည်။ ပေါလိုဖရေးအနေနှင့်လည်း ပြည်တွင်းပြန်လာခဲ့ပြီး Sao Paulo မြို့ရှိ Pontifical Catholic University နှင့် Campinas တက္ကသိုလ်တို့တွင် စာသင်ကြားရန်ရာထူးကို လက်ခံခဲ့သည်။ ပြည်ပတွင် ရှိနေစဉ် နှစ်ကာလများအတွင်း သူ၏နိုင်ငံရေးနှင့် ပညာရေးခံယူချက်တို့မည်သည့်အခါကမျှ မပျောက်ကွယ်ခဲ့ပါ။ ချက်ခြင်းပင် အလုပ်သမားပါတီအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့ပြီး စာတတ်မြောက်မှုနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ မူဝါဒရေးရာတွင် အထင်ကရပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့သည်။ ၁၉၈၉ ခုနှစ်တွင် Sao Paulo မြို့၏ မြူနီစပါယ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် အလုပ်သမားပါတီမှ အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးနောက် ဖရေးအားပညာရေးဝန်ကြီးအဖြစ် ခန့်အပ်ခဲ့သည်။ သူ၏အုပ်ချုပ်မှုကာလများတွင်း သက်ကြီးပညာရေး၊ သင်ရိုးညွှန်တမ်းပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး၊ လူထုအခြေပြု ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရေးနှင့် ရည်မှန်းချက်ကြီးမားသောစီမံချက်ဖြစ်သည့် ကျောင်းများကို ဒီမိုကရေစီ စာသင်ကျောင်းများဖြစ်လာစေရေး မူဝါဒများချမှတ်ကျင့်သုံးရေး အစရှိသည့် ဆန်းသစ်သော ပညာရေးအစီအစဉ်များကို အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည်။
ပညာရေးဝန်ကြီးရာထူးမှ အနားယူပြီးသည့်နောက်ပိုင်း ဘ၀၏နောက်ဆုံးခြောက်နှစ်ကာလများတွင် စာရေးသားခြင်း နှင့် နိုင်ငံတွင်း၊ နိုင်ငံတကာလှည့်လည်၍ ဟောပြောပို့ချခြင်းတို့ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ဤကာလများမှာ သူ၏ပညာရှင် လုပ်ငန်းများ ရင့်ကျက်ခြင်းနှင့်အတူ အမြင့်မားဆုံးရောက်ရှိချိန်လည်းဖြစ်သည်။ ဆွေးနွေးငြင်းခုံကြရပြီး ပုဂ္ဂလ အမြင်သဘောထားများပါဝင်သော စာအုပ်များစွာကိုရေးသားခဲ့ရာ ကမ္ဘာအနှံ့တွင် ဖတ်ရှုလေ့လာသူ များစွာရှိခဲ့သည်။ ဤစာအုပ်များနှင့် လူတွေ့ အင်တာဗျူးများ၊ ဆောင်းပါးများတွင် အများစိတ်ဝင်စားသည့် သူ့ကိုယ်ပိုင်နှင့် အခြားသော ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ စာအုပ်တို့ကို မေးခွန်းများထုတ်ခဲ့သည်။ အသက်ရှင်နေထိုင်ခွင့် များများမရှိတော့သည်ကို ကြိုတင် သိရှိခဲ့သလိုပင်။ ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင် ကွယ်လွန်ခဲ့သော်ငြားလည်း သူ၏လက်ရာများနှင့် အတွေးအမြင်တို့မှာ တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင် ရှင်သန်နေဆဲရှိသည်။ ဤသို့သြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိရခြင်းမှာ သူ၏အတွေးအခေါ်များ၏ လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရာ ဆွဲဆောင်မှုရှိခြင်းကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်။
လူကြိုက်အများဆုံးအတွေးအခေါ်မှာ ပညာရေးသည် အစဉ်အမြဲပင် နိုင်ငံရေးလုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်သည်ဆိုသော အချက်ပင်ဖြစ်၏။ ဤအတွေးအမြင်မှာ သူ့အတွက် ဆောင်ပုဒ်မျှသာမဟုတ်ပါ။ အမှန်စင်စစ်မူ ဖရေး၏ ပညာရေးသီအိုရီကို နားလည်ရန်အတွက် အချက်အခြာကျလှပေသည်။ သူ့အနေဖြင့်မူ ပညာရေးတွင် လူမှုဆက်ဆံရေးအစဉ်အမြဲ ပါရှိခြင်းဖြစ်လေရာ နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ ရွေးချယ်မှုများလည်း အလိုအလျောက် ပါရှိပြီးသားဖြစ်တော့သည်။ မည်သည့် ပညာရေးလုပ်ဆောင်ချက်တွင်မဆို “ဘာကို” “ဘာကြောင့်” “ဘယ်လို” “အဆုံးသတ်မှာမူဘယ်သို့” နှင့် “ဘယ်သူတို့အတွက်” စသည့် မေးခွန်းများမှာ ပဓာနကျနေကြောင်း ဖရေးမှ အခိုင်အမာမိန့်ဆိုလေသည်။ လက်တွေ့နယ်ပယ်နှင့် ကင်းလွတ်၍ သီးသန့်ဖြစ်နေခြင်းကို မဆိုလိုပါ။ ကျောင်းဆရာတိုင်း၊ ပညာရေးသမားတိုင်း ဤမေးခွန်းတို့ကို မေးမြန်းရပြီး အဖြေများမှာ မည်သည့် ဝေဘန်ဆန်းစစ်မှုရှိသော ပညာရေးလုပ်ငန်းအတွက်မဆို အလွန်အရေးကြီးသည့် စံလမ်းညွှန်များပင်ဖြစ်ချေတော့သည်။ သို့ဖြစ်လေရာ ပညာရေးတွင် ကြားနေရန်မဖြစ်နိုင်သကဲ့သို့ ပညာရေးမူဝါဒများနှင့် လက်တွေ့လုပ်ငန်းများသည် လူမှုဘ၀များထဲသို့ ထဲထဲဝင်ဝင်သက်ရောက်မှုရှိနေသည်ကို အသေအချာ နားလည်ထားရပေမည်။ ဤမူဝါဒနှင့် လုပ်ငန်းတို့သည် ခွဲခြားထုတ်ပယ်ခြင်းနှင့် မတရားမှုတို့ သက်ဆိုးရှည်စေရန်အတွက်ဖြစ်စေ၊ သို့တည်းမဟုတ် လူမှုပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက် အခြေအနေများကို ဖန်တီးတည်ဆောက်ရေးအတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေ သက်ရောက်မှုရှိနေ၏။
“အနှစ်သာရအားဖြင့် နိုင်ငံရေးသဘောဆောင်ပြီး ပင်ကိုယ်အရ သင်ယူရေးနှင့် သင်ကြားရေးဟန်ရှိသည့် ကျွန်ုပ်၏ရွေးချယ်မှုများနှင့် မျှော်လင့်ချက်အိပ်မက်များ ပိုမို၍ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်လာသည်နှင့် အမျှ၊ ပညာရေး သမားတစ်ဦးဖြစ်သော်ငြားလည်း နိုင်ငံရေးကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးလည်းဖြစ်ရသည်ဆိုသောအချက်ကို သိမြင် နားလည်လာသည်နှင့် အမျှ၊ ဒီမိုကရေစီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် မည်မျှအထိခရီးဆက်ရအုံးမည်နည်းဟု ကျွန်ုပ်အနေဖြင့် သဘောပေါက်စိုးရိမ်မှုကို ပိုမို၍ သိရှိလာတော့၏။ စာသင်သားတို့၏ သိစိတ်ကို နှိုးဆွပေးနိုင်သည့် ပိုင်းခြား ဝေဘန်ဆန်းစစ်မှုရှိသော ပညာရေးကို ကျင့်သုံးလာသည်နှင့်အမျှ ကျွန်ုပ်တို့ကို ပုံပျက်ပန်းပန်းပျက်ဖြစ်စေသည့် စိတ်ကူးယဉ်စွဲလန်းမှု၊ ဒဏ္ဍာရီဆန်မှုများအား လိုအပ်ချက်အရ ဆန့်ကျင်လာတော့သည်ကိုလည်း ကျွန်ုပ် သိနား လည်ရပြန်သည်။ ဤဒဏ္ဍာရီများကို ဆန့်ကျင်လာသည်နှင့်အတူ လွှမ်းမိုးမှုရှိနေသော အာဏာနှင့် ရင်ဆိုင်ရ တော့သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဒဏ္ဍာရီများကို ခွါချလိုက်သည်နှင့် အာဏာနှင့် အတွေးအမြင်တို့သာ ကျန်ရှိတော့၏။”
မိန့်ဆိုချက်နောက်ကွယ်က ကျင့်ဝတ်နီတိနှင့် နိုင်ငံရေးအဓိပ္ပါယ်မှာ ရှင်းလင်းနေသည်။ ကျောင်းဆရာတစ်ဦးအနေဖြင့် သိရှိ နားလည်ထားသည့် နိုင်ငံရေးအမြင်သဘောထားအရ အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးမှုရှိသော ပညာသင်ကြားရေး လိုအပ်ချက်ကား အမှန်ဖြစ်ပါမူ ကျောင်းသူကျောင်းသားများနှင့် သူတို့၏အသိပညာကိုလည်း အထူးလေးစားမှု ရှိရ ပေလိမ့်မည်။ “မိမိ၏အမြင်နှင့် မတူပါက လက်မခံနိုင်ဘဲ အဆင့်မရှိဟူသောအမြင်မျိုးရှိတတ်ကြလေသည်။ ဤသည်မှာ သည်းခံနိုင်